Ko Toe: ဒီလိုရှိပါတယ် လူကြီးမင်း
(၁) . . . . . အနုပညာကို သိပ်ဝါသနာပါသည်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အနုပညာသည် တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့၏။ အတီးအမှုတ် ကဗျာ စာပေ ပန်းချီ ပန်းပု ဓါတ်ပုံပညာတို့ ကို လွန်စွာပင် နှစ်သက်သည်။ ပန်းချီ၊ ဒီဇိုင်း နှင့် ဗိသုကာ အတတ်တို့ကို လွန်စွာပင် အရူးအမူး ပြုလုပ်တတ်ခြင်း။ ကာလပေါ်တေးသီချင်းများ နှင့် ရုပ်ရှင် နောက်ခံ တီးလုံးများကို လွန်စွာ သဘောကျခြင်း။ ကြိုက်သော သီချင်းကို တစ်ပုဒ်တည်း ရက်ပေါင်းများစွာ လပေါင်းများစွာ ဖွင့်တတ်ခြင်း။
(၁၀) . . . . . မည်သူ့ကို မဆိုတွေ့ပါက မျက်နှာနှင့် အခြားခြားသော ကိုယ်ခန္ဓာမှ မှဲ့များနှင့် အင်္ဂါရုပ်ကို သေချာစွာ ကြည့်ရှု့တတ်ခြင်း။ ခင်မင်လာပါက လက်ကိုင်တတ်ခြင်း ..
အဲယောင်လို့ .. လက္ခဏာကို ကြည့်ခွင့်တောင်းတတ်ခြင်း။ (မှတ်ချက်။ ။ မောင်ကိုတိုးသည် ဗေဒင် လက္ခဏာ ဆရာ မဟုတ်ပါ၊ ၀ါသနာ ပါလွန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။)
(၁၁) . . . . . အချိန်ကို အလွန်တန်ဖိုးထားတတ်ပါသည် .. တီဗီဂိမ်း လုံးဝမဆော့တော့ပါ (မှတ်ချက် .. ဟိုးအရင်က ဆော့ခဲ့ပါ၏) တီဗီ၊ ရုပ်ရှင် ကို လိုအပ်သည်ထက်
မကြည့်ပါ (ရုပ်ရှင်ရုံတွင် ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းသည် ကျွန်တော့် အတွက် အင်မတန် စိတ်ပျက်ဖွယ် ဖြစ်ရပါသည်။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား အမြဲနေတတ်တဲ့ ကျွန်တော့် အဖို့ အမှောင်ထဲတွင်ထိုင်ရသည်မှာ ကျွန်တော့်အတွက်ပြသနာ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ရုပ်ရှင်ရုံသွားခြင်း ကို ရပ်စဲထားသည်။) ကွန်ပျူတာနှင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါကလည်း ဇာတ်ကား တစ်ကားကို မိနစ်၃၀ထက်ပိုမကြည့် .. ဖိုက်တင်ခန်းများနဲ့ အခြားလေပေါခန်းများကို ကျော်ကြည့်တတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကုန်မှာ ကြောက်သဖြင့် အခန်းတွင်လည်း တီဗီ လုံးဝမထားပါ။ (မှတ်ချက်။ ။ တာလီဘန်ဆန်ဆန် အစွန်းရောက် နေခြင်း မဟုတ်ပါ။)
(၁၃) . . . . . ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာတွင် လူကြီးများနှင့် ပိုမိုပေါင်းသင်းမိခြင်း။ လူကြီးများရဲ့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် ဘ၀သင်ခန်းစာများ နှင့် အခြားသော ဗဟုသုတ အကြောင်းပြောတတ်သော လူကြီးလူငယ်တို့ကို လွန်စာလေးစားတတ်ခြင်း။ လူငယ်များနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာ၌ များသော အားဖြင့် အကြောင်းအရာတိုင်းကို ဟာသနှော၍ပြောတတ်သည်။ လေသံမာမာနှင့် စကားပြောတတ်သော ကျွန်တော့်ကိုတော့ တစ်ချို့က သဘောမကျတာက အမှန်ပါ။
(၂၁) . . . . . တိုးတက်မှု့မရှိက လွန်စွာပင် စိတ်ဆင်းရဲတတ်သူဖြစ်ခြင်းနှင့် တိုးတက်မှု့များ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ စာရင်းဇယားများနှင့် အလွန်အလုပ်ရှုပ်တတ်ခြင်း။
(၂၃) . . . . . ကိုယ့်ကိုယ် နှိမ်သောသူများ၊ နှိပ်ကွပ်ခဲ့သူများ၊ နှိမ့်ချသူများ နှင့် အထင်အမြင်သေးသူများကို လွန်စွာပင် ရင်ထဲ အသည်းထဲမှ ကျေးဇူးတင်တတ်ခြင်း။ (မှတ်ချက်။
။ သူတို့ရဲ့ နှိမ်တဲ့ အထင်အမြင်သေးတဲ့ အကြည့်တွေ စကားလုံးတွေကြောင့် ပိုပိုကြိုးစားတတ်ခြင်းကြောင့်ပါ။)
(၂၄) . . . . . နှုတ်ခမ်းမွေးကားကားဖြင့် ယောင်ထုံး ထုံးထားသော ရှေးခေတ် မြန်မာ မင်းညီမင်းသားများရဲ့ ယောင်ကြီးဗွေ စတိုင်ကို ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀မှစ၍ ယခုတိုင်
အလွန်သဘောကျသဖြင့် နောင်လာမည့် အချိန်ကာလ၌ ထိုစတိုင်ကို ထားရန် အသင့်ရှိနေသည်။ မိခင်ဖြစ်သူမှလည်း ထို ယောင်ကြီးဗွေ စတိုင်မျိုးထားရန် တိုက်တွန်းသည်။ (မှတ်ချက်။ ။ ဇာတ်ရူး၊ မင်းသားရူး၊ ဘုရင်ရူး မဟုတ်ပါ။)
Posted by MYO HAN HTUN at 11:06 AM
Labels: Feeling, My Funny Stories, Myself
(6) ဒါဆို ဆေးဘက်ဝင် အပင်တွေအကြောင်း ပို့စ်ရေးပါဦးဗျို့ ။
(၉) ဟီဟီ ဒါကြောင့် လူပျိုကြီး ဖြစ်နေတာများလား ။
(၁၀) ဟိုက်ရှားပါး.. လက်ကို ချက်ချင်းကိုင်ပစ်တာပါလား ။
(၁၄) ကလေးချစ်တာနဲ့ ဖြစ်ညှစ်ချင်တယ်တဲ့ ။ ကလေးတွေ သနားစရာ ။
(၁၅) ဟားဟား ဒီအချက်ကတော့ မတရားရီစရာ ကောင်းလွန်းတယ် ။ ဦး အခေါ်ခံရရင် မျက်နှာကြီး ပုပ်သိုးနေမယ့် ကိုတိုးကို မျက်စိထဲ ဘွားကနဲ ပေါ်လာလို့ ။
(၁၆) ဟာ.. အဲဒီတချက် တူတယ် ။ ကျွန်မ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် ညဘက် အပြင်မှာ ခြင်ကိုက်ခံပြီး ကြယ်တွေ ကြည့်တတ်တယ် ။ စင်္ကာပူမှာ မီးတွေလင်းနေတော့ ကြယ်တွေ သိပ်မမြင်ရဘူး ။
(၁၉) အဟီ ။ ကိုတိုးအိမ်မှာ နေတဲ့သူတွေတော့ ဇိမ်ပဲ ။ ကိုတိုးက ဒိုင်ခံ အိမ်သာဆေးနေမှာမို့လို့ ။
(၂၄) ဟဲဟဲ ခုလည်း ယောင်ကြီးဗွေနဲ့ဆို မင်းသားရုပ်ပေါက်လောက် ပါတယ် ။
သူများတွေထက် ထူးခြား ၊ ၂၄ချက်ကြီးများတောင်လားး)
ကိုကြီးတိုး .. တော်တော်လေး စုံလင်လှပါတယ် :)
စကားမစပ် ... နံပါတ် (၇) က သရေကျအောင်များလုပ်နေတာလား ဟင် :D
ကလေးအလွန်ချစ်တတ်ရင်တော့ တစ်ခုခုလိုပြီနော့ ဟဲဟဲ
@ မဂျစ်တူး and CMS
Comment တွေ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မအားတဲ့ကြားကနေ ရေးသာရေးလိုက်ရတယ် .. တစ်ချို့ဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်က ရယ်စရာဖြစ်လာတယ်။ အခြားလူတွေ အနေနဲ့ကတော့ ငပေါ တစ်ယောက်လို့ထင်ရင်ထင်လိမ့်မယ်။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဗျာ .. ပေါတာနဲ့ ရှားတာဆိုရင် ပေါတာပဲ ကောင်းမယ်ထင်လို့ပါ .. ဟီး။ ကျွန်တော့်မှာ အားလပ်တဲ့ အချိန်ကလေးများ ရှိခဲ့ရင်တော့ Blog တွေ အားလုံးကို လိုက်ဖတ်ရင်း Comment တွေ တသီကြီး ရေးပေးချင်ပါတယ် ဗျာ။
CMS ရေ .. လိုနေတာ အတွက်ကတော့ ရူးမတတ်ပါပဲ .. ကံကြမ္မာ မဖန်တီးသေးလို့နေမှာပါ .. ဟီး .. :P
ရီလိုက်ရတာ ကိုတိုးရာ...အရမ်းကြီးတော့ ပေါမနေပါဘူး.. နည်းနည်းပါးပါးပါ..ဟားဟား
ကျေးဇူး...ကျေးဇူး...လူပျိုကြီး အကြောင်းအခုလို သိလိုက်ရတာ ကျေးဇူးပါ..း)
ကိုတိုး အသေးစိတ်လုပ်တတ်တာနဲ့ ၊ အချိန်မဖြုန်းတတ်တာ သိပ်ကောင်းတယ်။ ကိုတိုးဆီက အတုခိုးရမယ်ဗျာ။